ကလေးဘဝအခက်အခဲ၊ ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အရွယ်ရောက်သူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး တည်ချက်များအကြားအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာရှင်းလင်းချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း - Bailey နှင့် Bailey (၂၀၁၃) နှင့် Rind (2013) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်အပေါ်တုံ့ပြန်မှု
Arch လိင်ပြုမူနေ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2015 ဇန်နဝါရီ 1 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2014 ဇန်နဝါရီ; 43 (1): 191-196 ။
Andrea အယ်လ် Roberts သည်, အမ်မာရီယာ Glymourနှင့် Karestan C. Koenen
တစ်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်အမေရိကန် Datasets အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့ကလေးသည်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လိင်တူလိင်အကြားထူထောင်အသင်းအဖွဲ့မှတ်ချက်ပြုခြင်းနှင့်လေ့ယူဆအဖြစ်ဤအသင်းအဖွဲ့ကြောင့်အလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်လွှမ်းမိုးသားသမီးရဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ဆုံးဖွယ်ရှိခဲ့ရှိမရှိမေးခဲ့တယ်, ဒါမှမဟုတ်ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ, ဟုတ်မဟုတ် (Roberts သည်, Glymour, & Koenen, 2013) ။ ကျနော်တို့အလွဲသုံးစားမှု orientation ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနှင့်ဤအယူအဆအကဲဖြတ်ရန်တစ်ဦးဆာပ variable ကိုချဉ်းကပ်ရာတွင်အသုံးပြုကြောင်းတွေးဆ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအခကျအခဲအလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လူသိများပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ orientation ကိုမလူသိများတိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထူးသကျနော်တို့အလွဲသုံးစားမှုလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့သာသက်ရောက်သည်မှန်လျှင်, အလွဲသုံးစားမှု၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ကြောင်းအခကျအခဲမြားကိုလညျးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်တူချင်းမြင့်မားပျံ့နှံ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းသင့်ပါတယ်, အဲဒီတွေးဆ တိမ်းညွတ်။
ကျနော်တို့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုခန့်မှန်းကြောင်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒုက္ခ၌ဤအယူအဆများအတွက်ထောက်ခံမှုတွေ့၏ ကြောင်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒုက္ခကိုလည်းလိင်တူချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု, မိတ်ဖက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာဟောကိန်းထုတ်; ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်စာရင်းကိုင်သည့်အခါနှင့်ကလေးဘဝကိုဒုက္ခလိင်တူချင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှု, မိတ်ဖက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆာ variable ကိုမော်ဒယ်များကိုသုံးပြီးကျနော်တို့လိင်အပေါ်အလွဲသုံးမှု၏သက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်လိင်ကွဲနှိုင်းယှဉ်လိင်တူလိင်နှင့်အတူလူပုဂ္ဂိုလ်များအကြားကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှု၏မြင့်မားသောစွန့်စားမှုအားလုံးကိုကြောင့်ထက်ဝက်ခန့်မှန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါး၏ထုတ်ဝေကတည်းကမတူညီတဲ့ data တွေကိုသုံးပြီးလေ့လာမှုအသစ်တစ်ရပ်အကျဉ်း, လိင်ကွဲနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိင်တူချစ်သူယောက်ျား, လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်များအိမ်ထောင်စုစိတ်ရောဂါ, အိမ်သူအိမ်သားဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအပါအဝင်ကလေးဘဝအတွက်အိမ်ထောင်စု-Level ဆိုးရွားသောအခွအေနကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ပိုဖွယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည် အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်နှင့် (ရိုးရိုးအဘို့သာ) မိဘခွဲခြာသို့မဟုတ်ကွာရှင်း (Andersen က & Blosnich, 2013) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကိုထပ်လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့လူနည်းစုများ၏မိသားစုများအကြားကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ကြောင်းအိမ်ထောင်စု-Level ကလေးဘဝအခကျအခဲ၏မြင့်မားပျံ့နှံ့များအတွက်အကောင့်စေခြင်းငှါ, အဘယ်အရာကို၏မေးခွန်းကိုတင်ပြထားတယ်။
ကျနော်တို့အနေဖြင့်စဉ်းစားဟန်မှတ်ချက်အလေးမြတ် ဘေလီနှင့်ဘေလီ (2013) နှင့် အခွံ (2013) နှင့်တုံ့ပြန်ရန်အခွင့်အလမ်းများအတွက် Editor ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးတစ်ဦးထိခိုက်မခံတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်း။ လိင်တူချစ်သူ, လိင်တူချစ်သူအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးပါပြီများနှင့်တစ်ဦးချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးသဘောအရနှစ်ဦးစလုံးခွဲခြားဆက်ဆံခံရဖို့ဆက်လက်သူ။ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုမကြာသေးမီက DSM-II ကိုကဲ့သို့တစ်ဦး diagnosable စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်ပင်အချက်များလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့အထောက်အကူပြုသောအရာကို၏မေးခွန်းကိုမေးရန်အထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ အခွံရောဂါဗေဒ "သို့မဟုတ်" maladaptive "", ပုံမှန်မဟုတ်သော "လိင်တူဆက်ဆံသူ orientation ကိုကြောင်းဆိုလိုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနကြာပါတယ်။ " ကျနော်တို့ကဒီပြည်နယ်ပါဘူးကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကမယုံကြဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအဖြစ်စရိုက်များနှင့်အတူပြုသောအမှုကြောင့်လူ့အပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး၏ဝိညာဉ်ကိုကောက်ယူခဲ့သည်။ ကျနော်တို့လိင်တူချစ်သူ, လိင်တူချစ်သူ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်သူကိုလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုထိခိုက်စေသို့မဟုတ်သိက္ခာချမယ်လို့နိုင်ငံရေးပန်းတိုင်ဘို့ငါတို့တွေ့ရှိချက်လျှောက်ထားမည်ဟုသောသူတို့နှင့်အတူသဘောမတူ။ သို့သျောကြှနျုပျတို့တစ်စုံတစ်ဦးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အလွဲသုံးစားသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်လွဲမှားပြီးရေးသားစေခြင်းငှါ, ကွောကျရှံ့ခွငျးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏မူလပေါ်တွင်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်ကလေးဘဝကိုအလွဲသုံးစားအကြား link ကိုသုတေသနပြုထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါသငျ့သညျမယုံကြည်ကြဘူး။
အဆိုပါနျဆာပ variable ကိုမော်ဒယ်များသက်သေပြလို့မရနိုင်ပါ, သူတို့သာအပိုဆောင်းကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ယူဆချက်တွေနဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အဖြစ်စကားပြန်ဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာအနေဖြင့်အခြားရွေးချယ်စရာအဆိုပြုချက်၏ယူဆချက်နှင့်ဂယက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အနက်များအတွက်လိုအပ်သောယူဆချက်နှိုငျးယှဉျ ဘေလီနှင့်ဘေလီ (2013) နှင့် အခွံ (2013).
ဘေလီနှင့်ဘေလီလိင်တူလိင်လည်းထိုကဲ့သို့သောကွာရှင်း, စိတ်ရောဂါ, ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအဖြစ်မိဘအခက်အခဲများ, ခန့်မှန်းတဲ့မျိုးဗီဇအချက်အားဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအဆိုပြုထား။ သူတို့ကတဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ် neuroticism များအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ကြောင်းမျိုးရိုးဗီဇအချက်များအဆိုပြုထား။ ဒီအယူအဆ, အကြားအသင်းအဖွဲ့လက်အောက်တွင်ဥပမာ, အစောပိုင်းကလေးဘဝနှင့်လိင်တူချင်းအပြုအမူအတွက် stepparents ၏ရှေ့တော်မှောက်ကို (မျိုးဗီဇအားဖြင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်သဖန်းသီး။ 1) ။ ကျနော်တို့ Bailey နှင့်ဘေလီရဲ့အယူအဆလိင်တူချစ်သူယောက်ျားနဲ့လိင်တူချစ်သူများ၎င်းတို့၏မိဘများ-ကြောင့်စိတ်ရောဂါ, အရက်သုံးစွဲခြင်း, ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်တည်ငြိမ်မှုသူတို့ရဲ့အန္တရာယ်တိုးမြှင့်မှဆင်း-လွန်မျိုးဗီဇသယ်ဆောင်သည်ဟုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့, ဒီဖြစ်နိုင်ချေကို support မမျိုးရိုးဗီဇသုတေသနရှိသေး၏။
ဘေလီနှင့်ဘေလီ: တူရိယာတစ်ဘုံအကြောင်းမရှိအဖြစ်မျိုးရိုးဗီဇ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လိင်တူလိင်
ဘေလီနှင့်ဘေလီများကအဆိုပြုထားသည့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အဆောက်အဦများအရက်နှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် epidemiological စစ်တမ်းများတွင်လက်ရှိအဆိုပါအသင်းအဖွဲ့များအဘို့အကောင့်နိုင်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေကို (NESARC) ဒေတာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကျနော်တို့တော်တော်များများ Simulator ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဒေတာအတွက်စာရင်းအင်းအသင်းအဖွဲ့များကိုတွေ့မြင်သည် Simulator နှင့်ကုဒ်များ၏အသေးစိတျအဘို့ (ဒီဖွဲ့စည်းပုံယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ခဲ့ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့, ဘေလီနှင့်ဘေလီများကအဆိုပြုထားသည့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းပုံထဲကပေါ်ထွန်းနိုင်သည့်အတွက်ကမ္ဘာတူအောင်ဖန်တီးခဲ့ နောကျဆကျတှဲ) ။ ဤရွေ့ကား Simulator (ထိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းပုံ Bailey နှင့်ဘေလီများကအဆိုပြုထားသည်ဟုညွှန်ပြသဖန်းသီး။ 1) ဒီ phenotypes အပေါ်အလွန်အားကြီးသောဗီဇသက်ရောက်မှုတည်ရှိသာလြှငျ NESARC တှငျတှေ့ stepparents နှင့်လိင်တူချင်းဝိသေသလက္ခဏာအကြားအသင်းအဖွဲ့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဘေလီနှင့်ဘေလီရဲ့အယူအဆဖြည့်ဆည်းဖို့, အန္တရာယ် allele ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 14 မိခင်ရဲ့ neuroticism ၏% နှင့်တစ်ဦးတူညီ-လိင်ဝိသေသလက္ခဏာရှိခြင်း၏ကလေး၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ 15% များအတွက်အကောင့်ရပါမည်။ ဤရွေ့ကားပြင်းအား၏အမိန့်ဖြင့်မဆိုစိတ်ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူရလဒ်ကိုဘို့မဆိုထူထောင်မျိုးရိုးဗီဇပစ်မှတ်ထက်ပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, 37,000 Single-ဘေ့ polymorphic (SNPs) ထက်ပိုမိုပါဝင်တဲ့ schizophrenia များအတွက် polygenic အန္တရာယ်ရမှတ် (schizophrenia များ၏အန္တရာယ်အများစု 3% မှာရှင်းပြခဲ့Purcell et al ။ , 2009အဆိုပါ NESARC ဒေတာအတွက်လက်ရှိအဆိုပါအသင်းအဖွဲ့များ generate ရန်, မိခင် neuroticism ၏ 14% ကရှင်းပြသည်တဲ့မျိုးဗီဇပစ်မှတ်ရှိခဲ့သည်လျှင်) .Even ကျနော်တို့ neuroticism အန္တရာယ် allele ယူဆ neuroticism အပေါ်အဖြစ်လိင်တူချင်းဝိသေသလက္ခဏာများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ကို (တူညီဒိုမိန်းအတွက်ရှုပ်ထွေး phenotypes ၏ shared heritability အပေါ်ကြိုတင်သက်သေအထောက်အထားပေးထားမဖြစ်နိုင်ပုံရသည်Purcell et al ။ , 2009) ။ တောင်မှထိုအခိုင်ခံ့မျိုးရိုးဗီဇသက်ရောက်မှုယူဆ, သာအသက်အရွယ်5နှင့်မိခင်ရဲ့ neuroticism တစ် stepparent ရှိခြင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ 50% အဘို့မှတ်လျှင် NESARC တှငျတှေ့လိင်တူချင်းဝိသေသလက္ခဏာရှေ့တော်၌ stepparent ရှိခြင်းအကြားအသင်းအဖွဲ့ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
ပေါင်းလဒ်တှငျကြှနျုပျတို့ယူဆချက်တစ်ခုအကွာအဝေးအောက်မှာဒေတာ simulated နှင့်များတွင်မဆိုဒေတာဘေလီနှင့်ဘေလီများကအဆိုပြုထားသည့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကိုက်ညီခဲ့ကြောင်းအစုံ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်စရိုက်များ၏မျိုးဗီဇပြဋ္ဌာန်းလက်ရှိအသိပညာ, နှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာစာရင်းအင်းပုံစံများထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းခဲ့ကြသည် NESARC ဒေတာ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်မိမိတို့၏အဆိုပြုထားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအလွန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းကောက်ချက်ချ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Simulator တှငျကြှနျုပျတို့အများအပြားဖြစ်နိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်စဉ်းစားပေမယ့်ကျနော်တို့မလွှဲမရှောင်နိုင်သမျှမော်ဒယ်များ၏ပြီးပြည့်စုံသောစကွဝဠာစူးစမ်းနှင့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လင့်များ (ဥပမာ, linear သက်ရောက်မှု) ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံအကြောင်းကိုယူဆချက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါဘူး။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်အချို့သောအခြားရွေးချယ်စရာ, အဆိုပြုထားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လေ့လာဒေတာနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ရှုပ်ထွေးသောဒေတာ-General ယန္တရားရှိကွောငျးကိုထုတ်မအုပ်စိုးလို့မရဘူး, ကြှနျုပျတို့ထိုကဲ့သို့သောယန္တရားအဆိုတင်သွင်းဖို့ Bailey နှင့်ဘေလီဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ယခုကြှနျုပျတို့မှဖွင့် အခွံရဲ့ (2013) ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေးဆ။ အခွံကျနော်တို့လေ့လာသည့်ကလေးဘဝအခကျအခဲ (ဆင်းရဲမွဲတေမှု, မိဘအရက်ပြဿနာ, မိဘစိတ်ရောဂါနှင့် stepparent ရှိခြင်း) အသိအမှတ်ပြုသို့မဟုတ်တည်ဆဲလိင်တူချင်းဆွဲဆောင်မှုအပေါ်သရုပ်ဆောင်၏တိုးမြှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှဦးဆောင်သည့် "စံတန်ဖိုးထိန်းချုပ်မှုအားနည်းစေ" ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အခွံကလေးကမတရားသဖွငျ့၏အတွေ့အကြုံများကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်အားကောင်း Non-စံတန်ဖိုးဖြစ်စေခြင်းငှါခွင့်ပြုမထားဘူးအဘယျကွောငျ့မရှင်းလင်းသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါး၌ဤဖြစ်နိုင်ခြေဖော်ပြထား:
... အလွဲသုံးစားမှုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအခြားသူများထံမှရဲ့သားကောင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားခံစားရနိုင်ပြီး, ဒါကြောင့်, လူမှုရေးအရ stigmatized ဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာပြုမူဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိဖြစ်စေခြင်းငှါ, လိင်တူချင်းဆွဲဆောင်မှုအသိအမှတျပွုသို့မဟုတ်လိင်တူချင်းမိတ်ဖက်ရှိခြင်းအပါအဝင် (Saewyc et al ။ , 2006) ... ။ ဒါဟာအစလိင်တူလိင်ကိုပိုပြီးလက်ခံနှင့်လျော့နည်းရဲ့သားကောင်ရှိရာလူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာလိင်တူချင်းလိင်စိတ်တိမ်းညွတ်၏ပျံ့နှံ့မှုပိုမိုမြင့်မားပါလိမ့်မယ်များနှင့်အလွဲသုံးစားမှုများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ညီမျှမှုနိမ့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကိုလိုက်နာလိမ့်မယ်။ (စ။ 169)
ကျွန်တော်နှင့်အတူ "လူမှုရေးအရ stigmatized" ကိုအစားထိုးခဲ့လျှင် "counternormative" ဟုငြင်းခုံခြင်းအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့အခွံရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ပုံကျွန်တော်တို့ဟာတွင်ဤလမ်းကြောင်းနှစ်ခုမီးမောင်းထိုးပြ (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်အကျိုးသက်ရောက်သောအတော်ကြာလမ်းကြောင်းညွှန်ပြ သဖန်းသီး။ 2).
ဒါဟာ NESARC data တွေကိုသုံးပြီးအခွံရဲ့ယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အခွံရဲ့အဆိုပြုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာတိကျမှု ရှိ. , Non-စံတန်ဖိုးငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများမသက်ဆိုင်ကလေးကအလွဲသုံးစားမှု status ကို၏လိင်တူလိင်နှင့်ဆက်စပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုတွေ့ကြုံခံစားဘူးသူအပုဂ္ဂိုလ်များအကြားလိင်တူလိင်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏တူရိယာ၏အသင်းအဖွဲ့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ စားပွဲတင် 1 ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုတွေ့ကြုံခံစားဘူးသူအယောက်ျားမိန်းမတို့အကြားကလေးဘဝဒုက္ခအားဖြင့်လိင်တူချင်းလိင်၏ပျံ့နှံ့မှုပြသသည်။ လိင်တူလက်ထပ်ဆွဲဆောင်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုမျှမအလွဲသုံးစားမှုသတင်းပို့ပုဂ္ဂိုလ်များ, မိတ်ဖက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာ, ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေ့ကြုံသောသူတို့ကို၌တူညီသောသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း, ယေဘုယျအားဖြင့်မသောသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦး stepparent သို့မဟုတ်မိဘစိတ်ရောဂါမိဘအရက်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့သည်များထဲတွင်။ အပြီးသတ်သောမပေးပေမယ့်အဲဒီဒေတာကလေးကအလွဲသုံးစားမှုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ မှလွဲ. လိင်ပေါ်ဤအကြောင်းသည် non-စံတန်ဖိုးအတှေ့အကွုံအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ရှိကွောငျးအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လိင်တူချင်းဆွဲဆောင်မှု, မိတ်ဖက်များနှင့်ကလေးဘဝကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ထိတွေ့မဟုတ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတကာတို့ထက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝခွအေနမြေားဖွငျ့ဝိသေသလက္ခဏာများပျံ့နှံ့, NESARC (n= 10,375)
ဘေလီနှင့်ဘေလီမှားယွင်းစွာကျနော်တို့ကတူရိယာ (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒုက္ခ) အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူနည်းစုလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင့်အခြေတည်စကလေးဘဝလိင်စိတ်တိမ်းညွတ်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေပယ်ချခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့အပေါ်တဲ့အခါမှာအေးစက်တန်ဆာအရွယ်ရောက်ပြီးသူလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့နှင့်အတူ uncorelated ကြောင့်ဆန့်ကျင်တွင်, ကြှနျုပျတို့သညျဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုငြင်းပယ်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒုက္ခတိုက်ရိုက်မတရားသဖွငျ့နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ orientation ကိုနှစ်ဦးစလုံးထိခိုက်ရသောအခြေတည်စကလေးဘဝလိင်စိတ်တိမ်းညွတ်, ထိခိုက်ပါက, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒုက္ခနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ orientation ကိုအကြားဆက်စပ်မှုတို့ကိုမတရားသဖွငျ့အဘို့အညှိနှိုင်းမှုအားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်မပေးသင့်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ Bailey နှင့်ဘေလီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာပ variable ကိုမော်ဒယ်များများအတွက် key ကိုယူဆချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြောင်းတန်ဖိုးထား: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝဒုက္ခ (အဆာပ variable တွေကို) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ orientation ကိုအဘယ်သူမျှမ unmeasured အကြောင်းတရားများရှိပါသည် (1); နှင့် (2) ကလေးဘဝဒုက္ခကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုမှမသက်ဆိုင်သောတခြားယန္တရားမှတဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာ orientation ကိုမထိခိုက်ပါဘူး။ သူတို့ကထိုအယူဆစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နှင့်လေ့လာတွေ့ရှိပင်ကိုယ်မူလပုံစံများတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာရှင်းပြချက်အဆိုပြုထားမပြုစေခြင်းငှါငြင်းခုန်။ ကျနော်တို့ကယူဆစစ်မှန်တဲ့မကျမည်အကြောင်းသဘောတူပေမယ့်, ဘေလီနှင့်ဘေလီများကအဆိုပြုထားသောတိကျသောအခြားရွေးချယ်စရာ implausible ပုံရသည်။ ကျနော်တို့ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်အခြားနည်းလမ်းအပေါ်နောက်ထပ် theorizing ကြိုဆိုပါတယ်ကြောင့်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့နှင့်လိင်တိမ်းညွတ်၏ဇစ်မြစ်နှစ်ဦးစလုံး၏ကျနော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်။
ဆာ variable ကိုမော်ဒယ်များခိုင်မာတဲ့ယူဆချက်အပေါ်မှီခိုပေမယ့်နိဂုံးချုပ်, ဘေလီနှင့်ဘေလီနှင့်အခွံအားဖြင့်အဆိုပြုထားသည့်အခြားရွေးချယ်စရာကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ရှင်းလင်းချက်ကိုလည်းဒေတာ Simulator ဆီကနေပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများနှင့် NESARC အချက်အလက်များ၏နောက်ထပ်စာမေးပွဲနှင့်အတူကိုက်ညီမှုပေါ်လာကြောင်း assumptions- ယူဆချက်အပေါ်အားကိုး။
နောက်ဆက်တွဲ: အ Simulator ၏အသေးစိတ်
အသက်အရွယ်5မတိုင်မီ stepparent ဘက်လိုက်မှုအစီရင်ခံကြောင့်ထိခိုက်ခံရဖို့အနည်းဆုံးဖွယ်ရှိဖြစ်သကဲ့သို့ Bailey နှင့်ဘေလီများကအဆိုပြုထားသည့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းပုံစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, ငါတို့က, တူရိယာအဖြစ်အသက်အရွယ်5မတိုင်မီ stepparent အတူယောက်ျားအတွက်လိင်တူချင်းဝိသေသလက္ခဏာ၏ဖြစ်ရပ်မှာကြည့်ရှုကြ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာမှာတွေ့ရတဲ့စာရင်းအင်းဖျန်ဖြေအများစုကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအားဖြင့်ကြောင့်ကျနော်တို့အာမခံအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကအမူအကျင့်ရလဒ်ကိုအပေါ်ပေးထားသော Single-ဘေ့ polymorphic (SNP) ၏ဖွယ်ရှိအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားခန့်မှန်းရန်ရှိရင်းစွဲဗီဇလေ့လာမှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ anthropometric တင်းရောဂါများနှင့်အမူအကျင့်စရိုက်များ၏မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်အသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား (GWAS) ပေးထားသော SNP ပုံမှန်အားဖြင့် (ကရိုအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ထက်နည်း 0.5% များအတွက်အကောင့်တစ်ခုကိုညွှန်ပြVrieze, Iacono, & McGue, 2012) ။ မကြာသေးမီက GWAS Meta-analysis သည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုထိခိုက်စေသည် SNPs အသေးစားသို့မဟုတ်အလွန်သေးငယ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားရှိသည်အကြံပြုသည်။ ဒီလေ့လာမှုကထက်ပိုမို 2.5 ပုဂ္ဂိုလ်များထံမှ 17,000 သန်း SNPs ဆန်းစစ်နှင့် neuroticism များအတွက် GWAS-Level အရေးပါမှုနှင့်အတူဖော်ထုတ်ပင်တဦးတည်း SNP ပျက်ကွက်; ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်အသိစိတ်နှင့်ဆက်စပ် SNPs များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား (ကောင်းစွာပွားအသေးစားနှင့်မဟုတ်ကြက de Moore et al ။ , 2010).
ကျနော်တို့နေဆဲမျိုးရိုးဗီဇ၏အတန်ငယ်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ပေးထားသောလက်ရှိနားလည်မှုဖြစ်ခြင်းစဉ်မျိုးဗီဇများကအကြီးဆုံးသဖွငျ့ထုတ်လုပ်မယ်လို့ယူဆသုံးပြီး, (StataIC 15,000 အတွက်) 11 တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ဒေတာများ simulated ။ ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားကြောင်းယူဆချက်, မဖြစ်နိုင်အောက်ကယူဆချက်များစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေမယ့် ဖွယ်ရှိ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း Bailey နှင့်ဘေလီရဲ့ယူဆချက်ကိုထောကျပံ့မဟုတ်ဘူး။ ဒီခြင်း simulation နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပင်ဤသည်အလွန်အစွန်းရောက်ယူဆချက် Bailey နှင့်ဘေလီရဲ့အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ပဲ:
ကျနော်တို့မိခင်ရဲ့ neuroticism ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးနောက်တော်သို့လိုက်ယူဆ။
ကျနော်တို့ကျပန်း 0.2 ၏အသေးစား allele ကြိမ်နှုန်း (MAF) နဲ့မိခင်တစ်ဦး neuroticism အန္တရာယ် allele တာဝန်ပေးအပ်။ ကျနော်တို့ allele 0.48 SDs (အားလုံးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏ GWAS Meta-analysis သည်တှငျတှေ့အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်အရွယ်အစား) က neuroticism တိုးမြှင့်ယူဆ။ ကျနော်တို့ (ကပုံမှန် SNP အဘို့ခန့်မှန်း 3.8% ထက်7ကြိမ် သာ. ကြီးမြတ်, အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားနှင့် MAF ၏ဤပေါင်းစပ်ဒီ SNP ကတာဝန်ယူထားကြောင်းမိခင်ရဲ့ neuroticism ၏ 0.5% အတွက်ရလဒ်သတိပြုပါVrieze, Iacono, & McGue, 2012).
ကျနော်တို့ကမိခင်ရဲ့ neuroticism အဆိုပါသို့မှသာတစ်ဦး stepparent ရှိခြင်းအဖြစ်အသက်အရွယ် 25 တစ် stepparent ရှိခြင်း၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ (ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုကိုပိုမိုမှန်းဆပြီးဖြစ်လာဖွယ်ရှိ) စကားလုံး၏ coded တစ်ဦးချင်းစီက stepparent ရှိခြင်းသူမ၏သူငယ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ 5% အဘို့မှတ်ယူဆ အသက်အရွယ်5က stepparent ရှိခြင်း၏ပျံ့နှံ့မှုကတော့ NESARC datasets ၌ရှိသကဲ့သို့, 2.6% ဖြစ်ခဲ့သည်။
မိခင်ဟာ neuroticism အန္တရာယ် allele ခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်တစ်ဦး 0.5 ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်တကွသူငယ်ဖို့အန္တရာယ် allele တာဝန်ပေးအပ်။
ကျနော်တို့ neuroticism များအတွက်ကလေး၏အန္တရာယ် allele 0.48 SDs (အားလုံးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏ GWAS Meta-analysis သည်တှငျတှေ့အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်အရွယ်အစား) ကတစ်ဦးလိင်တူချင်းဝိသေသလက္ခဏာရှိခြင်းသူ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးလာယူဆ။ ကျနော်တို့ပျံ့နှံ့သည့် NESA RC ဒေတာ၌ရှိသကဲ့သို့, 1.9% ခဲ့တာကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောလိင်တူချင်းတိမ်းညွတ်ရှိခြင်း၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူလူတို့အားလိင်တူချင်း orientation ကိုတာဝန်ပေး။ ရလဒ် Datasets ခုနှစ်, SNP အနေနဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုလိမ့်မည်သည့်လိင်တူချင်းတိမ်းညွတ်, ရှိခြင်း၏ကလေး၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ 3% ကရှင်းပြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏တစ်ခုတည်းသောကြီးမားသောလူဦးရေ-ကိုယ်စားလှယ်အမွှာလေ့လာမှုများတွင်စုစုပေါင်းမျိုးရိုးဗီဇသက်ရောက်မှု (အထီးလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့အတွက်ကှဲလှဲ၏ .34-.39 ရှင်းပြဖို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်Langstrom, Rahman, Carlstrom, & Lichtenstein, 2010) ။ ထို့ကြောင့် neuroticism SNP လိင်တူချင်းတိမ်းညွတ်၏မျိုးရိုးဗီဇအစိတ်အပိုင်း၏ 8% ကိုရှင်းပြလိမ့်မယ်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်မှုကိုလည်းဗီဇမြင့်မားမဖြစ်နိုင်ဖြစ်သော neuroticism နှင့်လိင်တိမ်းညွတ်အပေါ်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား, ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်။
ဒီခြင်း simulation ကနေရရှိလာတဲ့ data တွေကိုအသုံးပြုခြင်း, ကျနော်တို့ခန့်မှန်းအဖြစ် stepparent သုံးပြီးလိင်တူချင်းတိမ်းညွတ်များအတွက်မော်ဒယ် fit ။ ဒီ model အတွက် stepparent များအတွက်အလေးသာအချိုး (OR) 1.07 (95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ [CI] = 0.5, 2.2) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, NESARC ဒေတာတစ်ဦး stepparent ရှိခြင်းအတွက်ခိုင်မာတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်၏ခန့်မှန်း (OR = 1.8, 95% CI = 1.2, 2.7) ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးယူဆသည့် NESARC ဒေတာမှာတွေ့ရတဲ့အသင်းအဖွဲ့များထုတ်လုပ်ရန်မပြုခဲ့ကတည်းကကျမတို့နောက်ထပ်သူတို့အားအသင်းအဖွဲ့များထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောယူဆချက်စူးစမ်း။ ကျနော်တို့ကို (အန္တရာယ် allele ၏ရှေ့မှောက်တွင်မိခင်ရဲ့ neuroticism ၏ 1% များအတွက်မျိုးရိုးဗီဇစာရင်းကိုင်အတွက်ရလဒ်ဖြစ်သော 1 SD ကကမိခင်ရဲ့ neuroticism တိုးမြှင့) ကို SNP 14 တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားခဲ့ယူဆ။ ဤရွေ့ကားယူဆချက်အသက်အရွယ် 38 ရှေ့တော်၌ stepparent ရှိခြင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ 5% များအတွက်စာရင်းကိုင်မိခင်ရဲ့ neuroticism ခဲ့သည်။ ဒါဟာ neuroticism (သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်မျိုးဗီဇအချက်) ကကလေး၏အသက်အရွယ်5အားဖြင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်နောက်အိမ်ထောင်ပြုရန်၏ကွာရှင်းသို့မဟုတ်သေမင်း၏အန္တရာယ်ပိုမိုထက်သုံးပုံတစ်ပုံများအတွက်အကောင့်နိုင်ကြောင်းအလွန်မဖြစ်နိုင်ပုံရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေဤယူဆချက်နေဆဲလိင်တူလိင်အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ဖန်တီးနှင့် NESARC ဒေတာအတွက်အဖြစ်အကြီးစားအဖြစ် stepparent ရှိခြင်းဘူး (OR = 1.4, 95% CI = 0.7, 2.6) ။ NESARC မှာတွေ့ရှိသည်ဟုဆင်တူအနေနဲ့အသင်းအဖွဲ့ရရှိရန်, ကျွန်တော်တစ်ဦး stepparent, အလွန် implausible မြင်ကွင်းရှိခြင်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ 1.35% များအတွက်စာရင်းကိုင်သူမ၏ neuroticism အတွက်ရရှိလာတဲ့, 50 SD ကက stepparent ရှိခြင်း၏မိခင်ရဲ့ neuroticism တိုးမြှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေယူဆ။
ကျနော်တို့ထို့နောက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအားဖြင့်စာရင်းအင်းဖျန်ဖြေခြင်း၏ပြဿနာလှည့်။ ကျနော်တို့ကလေး၏ကြောင့်ဘေလီနှင့်ဘေလီရဲ့ယူဆချက်ကိုအောက်ပါ (0.3 SD နှင့်ကလေး၏အန္တရာယ်မျိုးဗီဇများကမိခင်ရဲ့ neuroticism တိုးမြှင့်အန္တရာယ် 0.48 SD ကများကစွန့်စားမှုတိုးလာထိုကဲ့သို့သောကြောင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (ကစဉ်ဆက်မပြတ် variable ကို) ၏ကလေး၏နောက်ခံအန္တရာယ်မိခင်ရဲ့ neuroticism တစ် function ကိုခဲ့ပါတယ်ယူဆ မျိုးဗီဇသည်ဤအတန်ငယ်မတရားယူဆချက်သည့်) ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်မိခင်ရဲ့ neuroticism ထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကလေး၏အတှေ့အကွုံကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟု, မိခင်ရဲ့ neuroticism လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကလေး၏အန္တရာယ်၏ 10% အဘို့မှတ်ခြင်းနှင့်ကလေး၏ neuroticism အန္တရာယ် allele ကလေး၏အန္တရာယ်၏ 5% အဘို့မှတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (အနေနဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့နှင့်မဖြစ်နိုင်, အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစား) ၏။
ငါတို့ကဲ့သို့မြင့်မားသော, အလတ်စားမသက်ဆိုင်ဘဲမူလလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာ၏, NESARC အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၏ပျံ့နှံ့ကိုက်ညီအလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်အပေါ်အခြေခံပြီးအနိမ့်သို့မဟုတ်အဘယ်သူအားမျှ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ပေးအပ်။ ဒီယူဆချက်နှင့်အတူလိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအလယ်အလတ်နှင့်အမြင့်မားများ၏ပျံ့နှံ့ NESARC နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတွင်ဤပျံ့နှံ့နေတဲ့လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်း၏ stepparent နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုများအကြားအသင်းအဖွဲ့ဖျန်ဖြေမပေးခဲ့ပါဘူးထက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်နောက်လာမည့်ကလေး၏အခြေတည်စလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာအလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်ထိခိုက်ယူဆ။ ကျနော်တို့ NESARC ဒေတာအတွက်လိင်တူချင်းဝိသေသလက္ခဏာနှင့်မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအကြားအလွဲသုံးစားမှု၏ပျံ့နှံ့ကိုက်ညီအလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်အညီအနိမ့်သို့မဟုတ်အဘယ်သူအားမျှ, အလတ်စား, အဖြစ်မြင့်မားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ပေးအပ်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်အသက်အရွယ်5နှင့်လွတ်လပ်သော variable ကိုအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (မြင့်မားသော, အလတ်စား, အနိမ့်သို့မဟုတ်အဘယ်သူမျှမ) မီတ stepparent ရှိခြင်းနှင့်အတူမှီခို variable ကိုအဖြစ်လိင်တူချင်းဝိသေသလက္ခဏာအဘို့အ ORS တွက်ချက်။ ဒီ model များတွင် stepparent ၏အသင်းအဖွဲ့လိင်တူချင်းဝိသေသလက္ခဏာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (ပြုပြင်မော်ဒယ် OR = 1.2, 95% CI = 0.6, 2.2 မရှိဘဲမော်ဒယ်ကနေ attenuated ခဲ့ပါတယ်နှင့်အတူ; unadjusted မော်ဒယ် OR = 1.7, 95% CI = 0.9, 3.0 ) ။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ NESARC data တွေကိုသုံးပြီးရရှိသောသူတို့အားအလားတူခဲ့ကြသည်။
* ရှင်းရှင်းလင်းလင်း obs 15000 set 15000 လေ့လာတွေ့ရှိချက် * အသေးစား allele အကြိမ်ရေ = 0.2 * မိခင်ဟာ allele ရှိပေအမြိုးအနှယျ 2829382 set?
gen ဗီဇ = ယူနီဖောင်း ()> ၈ ။ မျိုးဗီဇသည် neuroticism တိုးမြှင့်ခြင်းကို .8 standard beta * (Big 48 genetic study မှအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှု) gen momneurotic = invnorm (uniform ()) + (။5* gene) reg momneurotic gene * gene accounts မိခင်၏ Neuroticism ၏ ၃.၈% သည်အသက် ၅ နှစ်မတိုင်မီမိခင်၏ neuroticism ၏ ၂.၆% သည်မွေးကင်းစကလေးများရှိသူများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းသည်မိခင်၏ neuroticism ကို ၂၅% သောမိထွေး stepparent = (48 * momneurotic + invnorm (ယူနီဖောင်း)) တွင်ဖော်ပြထားသည်။ > 3.8 sum * ကလေးသည်ဖခင်ထံမှ allele ကိုအမွေခံထားသလား။
အစေ့ကို set 1462964 gen childhasgene = ယူနီဖောင်း ()> ။9* ကလေးကမိခင်ကနေ allele အမွေရသနည်း
gen coinflip = ယူနီဖောင်း ()> ။ ၅ ။ မျိုးဗီဇ = ၁ သည် childhasgene ကိုအစားထိုးလျှင်မျိုးရိုးဗီဇလျှင် coinflip =5tab ဗီဇ childhasgene, r col * ကလေး၏ ဦး တည်ချက် - ယောက်ျား၏ ၀.၀၁၉ သည် NESARC တွင်လိင်တူချစ်သူများဖြစ်ကြပြီး Big 1 လေ့လာမှုမှအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ gen geng childgay = invnorm (ယူနီဖောင်း ()) + (1 * childhasgene)> ၂.၂ * ဤယူဆချက်များအရ neuroticism gene သည် ၃.၃% သောလိင်တူချစ်သူ logit childgas childhasgene ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ ၃.၃% သည်ဤယူဆချက်များသည်ကလေး၏ ဦး တည်ချက်နှင့် stepparent အကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ကျနော်တို့ဒေတာထဲမှာမြင်?  ကျနော်တို့ကဒေတာတွေကိုမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း (မျှမရှိ, အသင်းအဖွဲ့) ပေါင်းလဒ် tab ကို childgay stepparent, chi2 ကော်လံအတိအကျတန်း * ကတစ်ခု OR = 1.8 ထုတ်လုပ်ရန်သနည်း?  (မ OR = 1.07) logit childgay stepparent, ဒါမှမဟုတ် * အစားဘယ်သို့လျှင် 1 SD ကအားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇ 1 SD ကအားဖြင့် neurotic တိုးနှင့် childgay?
gen momneurotic1 = invnorm (ယူနီဖောင်း ()) + (၁ မျိုးဗီဇ) * အသက် ၅ နှစ်မတိုင်မီမိထွေးပထွေးရှိသော ၂.၆% သောလူအများအပြားကိုထုတ်လုပ်ခြင်း gen stepparent1 = (2.6 * momneurotic5 + invnorm (ယူနီဖောင်း))> 1 sum * မိခင်၏ neuroticism ယခုအသက် ၅ နှစ်မတိုင်မီမိထွေးပကတိဖြစ်နိုင်ခြေ၏ ၂၉% ကိုတွက်ချက်သည်။ logit stepparent0.8 momneurotic1 * ကလေး၏ ဦး တည်ချက် - ယောက်ျား၏ ၀.၀၁၉ သည် NESARC တွင်လိင်တူချစ်သူများဖြစ်ကြ၏။ genogengay2.75 = invnorm (uniform ()) + အပေါ်မျိုးဗီဇ၏ SD အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသုံးပြု၍ ၁ ။ 29 * childhasgene)>5tab childgay1 * ယခုမျိုးရိုးဗီဇသည်လိင်တူချစ်သူ logit ဖြစ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏ ၁၄.၆% ကိုကိုယ်စားပြုသည် childgay1 childhasgene * ဤယူဆချက်များသည်ကလေး၏တိမ်းညွတ်မှုနှင့်ငါတို့ဒေတာများတွင်တွေ့ရသော * stepparent အကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသလား။  (မ OR = 0.9) tab ကို childgay1 stepparent1, chi2 ကော်လံအတိအကျအတန်း logit childgay1 stepparent1, ဒါမှမဟုတ် * မိခင်ရဲ့ neuroticism တစ် stepparent ရှိခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတစ်ဦးပိုမိုကြီးမားဘို့အကောင့်အဘယျသို့လြှငျကော
gen stepparent2 = (momneurotic1 + invnorm (ယူနီဖောင်း ()))> ၃.၀၅ ပေါင်းလဒ် * မိခင်၏ neuroticism သည်မိထွေးပထွေးဖြစ်နိုင်ခြေ၏ ၃၆% ရှိသည်။
* အဘယ်သူမျှမ, OR = 1.4 tab ကို childgay1 stepparent2, chi2 ကော်လံအတိအကျအတန်း logit childgay1 stepparent2, ဒါမှမဟုတ် * မိခင်ရဲ့ neuroticism stepparent ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပင်ပိုကြီးဘို့အကောင့်အဘယျသို့လြှငျကော
gen stepparent3 = (1.35 * momneurotic1 + invnorm (uniform ()))> 3.75 sum * မိခင်၏ neuroticism သည်မိခင်၏မိခင်နို့တိုက်သတ္တဝါသည်ဖြစ်နိုင်ခြေ ၅၀% ရှိသည်။ stepparent50 momneurotic3 * ဤသည် NESARC ရှိကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာနှင့်မိထွေးစပ်ဆက်နွယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသလား။
* နီးပါး, OR = 1.7, 95% CI = 0.9, 3.0 tab childgay1 stepparent3, chi2 ကော်လံအတန်းအတိအကျ logit childgay1 stepparent3, သို့မဟုတ် * အလွဲသုံးစားမှုများကိုထည့်သွင်းခြင်း * အလွဲသုံးစားမှုသည် mom neuroticism နှင့်ကလေး၏မျိုးရိုးဗီဇ gen childabuse = invnorm (uniform ( )) + (။ ၃ * momneurotic3) + (.1 * childhasgene) * အမိ၏ neuroticism သည်ကလေး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုဖော်ပြသည် childabuse momneurotic48 * ကလေး၏မျိုးရိုးဗီဇသည် ၄ ​​င်း၏လိင်မှုဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၏ ၄.၇% သည် childabuse childhasgene ကိုဆိုလိုသည်။ လိင်တူချင်းဆက်ဆံခြင်းကိုဤပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်ကိုမထိခိုက်ပါ။ ဤတွင်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (အနိမ့်၊ ၂.၂%၊ အလယ်အလတ်၊ ၃.၁%၊ မြင့်မားသော၊ ၃.၁%) သည် NESARC ထက်နိမ့်ကျပါသည်။ (အနိမ့်၊ ၂.၂%၊ အလတ်စား၊ ၄.၃%) , အမြင့်, 10%) gen sexabuse = (childabuse> 1) + (childabuse> 4.7) + (childabuse> 2.2) tab sexabuse tab childgay3.1 sexabuse, r ကို col * နှင့်လိင်အလွဲသုံးစားမှု NESARC ၌ရှိသကဲ့သို့မိထွေးနှင့်လိင်တူချစ်သူများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုမလျှော့ချ * ညှိ OR = 3.1, 2.2% CI = 4.3, 7.1 eg byte sexabuse2.35 = anycount (sexabuse)၊ တန်ဖိုးများ (၁) egen byte sexabuse2.05 = anycount (sexabuse)၊ တန်ဖိုးများ (၂) e-b yte sexabuse1.85 = anycount (sexabuse)၊ တန်ဖိုးများ (၃) logit childgay1 stepparent1.6 sexabuse95 sexabuse0.9 sex-abuse2.9, သို့မဟုတ် * လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်း * NESARC တွင်ပျံ့နှံ့မှု - ဖြောင့်သောယောက်ျားများ - နိမ့်ကျသည် (၁.၈%)၊ အလွဲသုံးစားမှု (1%) * လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများ: အနိမ့် (၁.၉%)၊ အလယ်အလတ် (၄.၇%)၊ အလွဲသုံးစားမှုမြင့်မားခြင်း (၁၂.၆%) သည်လိင်မှုကိစ္စပြုမှုကိုသုံးသောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်း1 sexabuse2 sexabuse2 gen sexabuse = (childabuse> 3) + (childabuse> 3) + (childabuse> 1) childgay3 == 1 အစားထိုး sexabuse = (childabuse> 2) + (childabuse> 3) + (childabuse> 1.8) အကယ်၍ childgay1.7 == 2.0 tab ကို childgay1.9 sexabuse လျှင်, r col * လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသည်မိထွေးပထွေးနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုအားနည်းစေသည် လိင်တူချစ်သူ NESARC ၌ရှိသကဲ့သို့?
Andrea အယ်လ် Roberts သည်, လူမှုရေးဦးစီးဌာနနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံ, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျောင်း, ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်, Kresge အဆောက်အအုံ, 677 Huntington ရိပ်သာ, Boston, MA 02115, USA ။
အမ်မာရီယာ Glymour, ကူးစက်ရောဂါနှင့် Biostatistics ဌာန, ဆေးပညာတက္ကသိုလ်ကယ်လီဖိုးနီးယားဆန်ဖရန်စစ္စကိုကျောင်း, ဆန်ဖရန်စစ္စကို,, CA, USA ။
Karestan C. Koenen, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစာပို့သမားကျောင်း, ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်, နယူးယောက်, NY, USA ။
Andersen က JP, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုများနှင့်လိင်ကွဲလူကြီးများအကြားဆိုးရွားသောကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများအတွက် Blosnich ဂျေကွာဟမှု: multi-ပြည်နယ်ဖြစ်နိုင်ခြေ-based နမူနာအနေဖြင့်ရလဒ်များ။ PLoS ONE ။ 2013; 8: e54691 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဘေလီ DH, Bailey JM ။ ညံ့ဖျင်းသောတူရိယာဆင်းရဲသားကိုအခြဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Roberts သည်, Glymour နှင့် Koenin (2013) မော်ကွန်းအပေါ်မှတ်ချက်။ 2013; 42: 1649-1652 ။ [PubMed]
et al Moore MH, ကော်စတာ: P, Terracciano တစ်ဦးက, Krueger R ကို, De Geus အီး, Toshiko T က, က de ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်အသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုများ၏ meta-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Molecular Psychiatry ။ 2010; 17: 337-349 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Langstrom N ကို, Rahman ကမေး, Carlstrom အီး, Lichtenstein P. မျိုးဗီဇများနှင့်လိင်တူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ: ဆွီဒင်၌သားအမွှာ၏တစ်ဦးကလူဦးရေလေ့လာမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2010; 39: 75-80 ။ [PubMed]
Purcell သည် SM, Wray ရော်ဘာ, ကျောက်ခေတ် JL, Visscher pm တွင်, O'Donovan MC, Sullivan က PF, et al ။ ဘုံ polygenic အပြောင်းအလဲ schizophrenia နှင့်စိတ်ကြွရောဂါ၏အန္တရာယ်ကိုစေတယ်။ သဘာဝ။ 2009; 460: 748-752 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အခွံခငိုကြွေးနေသောကောင်ကလေးရဲ့ orientation- မှစ. သဘောသဘာဝ, အလွဲသုံးစားမပြု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Roberts သည်, Glymour နှင့် Koenen (2013) မော်ကွန်းတစ်ဝေဖန်မှု။ 2013; 42: 1653-1664 ။ [PubMed]
ရောဘတ် AL, Glymour MM, Koenen KC ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်မတရားသဖွငျ့လူကြီးအတွက်လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ထိခိုက်စေသလား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2013; 42: 161-171 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Saewyc EM, Skay CL, Pettingell SL, Reis EA ၏, စေ့စေ့စပ်စပ် L ကို, Resnick M က, et al ။ အမည်းစက်၏အန္တရာယ်များ: လိင်တူချစ်သူ, လိင်တူချစ်သူနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ကနေဒါအတွက်ရိုးရိုးမြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု။ ကလေးသူငယ်လူမှုဖူလုံရေး။ 2006; 85: 195-213 ။ [PubMed]
Vrieze SI, Iacono WG ကို, မျိုးဗီဇ၏ McGue အမ်မြစ်ဆုံ, ပတ်ဝန်းကျင်, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စာတိုက်ဂြီနို-Wide အစည်းအရုံးလေ့လာမှုကမ်ဘာပျေါတှငျအပြုအမူ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် Psychopathology ။ 2012; 24: 1195-1214 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]